Rwanda: Paul Kagame Oo sheegay in Afrikaanka ay eeda leeyihiin... | Universal Somali TV
Rwanda: Paul Kagame Oo sheegay in Afrikaanka ay eeda leeyihiin haddii dadka kale qeexaan oo xaliyaan dhibaatooyinkeena.
Madaxwaynaha Rwanda Paul Kagame oo ka hadlayay qaybtii 4aad ee kulanka caalamiga ah ee nabadda iyo ammaanka Afrika ee magaalada Dakar ee dalka Senegal ayaa ugu baaqay hoggaamiyayaasha Afrika inay isku xirnaadaan si ay ugu guulaystaan ​​dhibaatooyinka xaga ammaanka isagoo intaa raaciyay in iskaashi la,aanta gudaha ay u oggolaatay amni-darrada in ay ku soo koraan qaaradda.
Kagame ayaa sheegay in nabadgelyo-darradu ay qaadataa qaabab badan, laga bilaabo sugidda amniga, siyaasadda kala qaybsan wax kastoo caqabad ku ah xasiloonida , waxaan ku guuleysan karnaa markaan yeelano wada shaqayn. Tani macnaheedu waa isku xirnaanshaha dhaxdeena ee madaxda Afrikaanka, "ayuu yiri Isniintii.
"Madaxa dalka Rwanda ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha kulanka hadii aan ogolaano dadka kale in ay qeexaan dhibaatooyinkeena oo ay qaataan mas'uuliyadda xalinteeda, taasi waa mid aan anaga eedeeda leenahay.
Hogaamiyaha ayaa ku nuux nuuxsaday waa in aan qaadannaa mas'uuliyadda nafteena, taas oo aan qofkale lagu haleeneenin laakiin ay wax kusoo kordhin karaan dadaalkeena. Waa inaan qaadannaa masuuliyad buuxda si aan u qeexno dhibaatooyinkeena iyo dadaal maaliyadeed. Wadashaqeyntu waa furaha, "ayuu yiri.
Kan-xigaIsraa&#039;iil Oo Lagu Eedeeyay Inay ...
Kan-horeFilibiin: Dibad-baxayaasha ku sugan c...
38,729,107 unique visits